မုန်းစရာကောင်းတဲ့အစာအိမ်ဝေဒနာကြီးကိုခံစားနေရပြီလား… – Trend.com.mm
Posted on April 2, 2019 April 3, 2019 by Shun Lei Phyo
ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အစာအိမ်ရောဂါအ ကြောင်းကို ခံစားဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အစာအိမ်ရောဂါဆိုးကြီးက လူတွေအတွက်သိပ်ကို ပြင်းထန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပဲဆိုတာ အခုပြောပြရင် ယုံပါ။ အစာအိမ်တစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ပြီဆိုရင် အောင့်လိုက်တဲ့ရင်ခေါင်း နာကျင်လိုက်တဲ့ ၀မ်းဗိုက် ခံစားလိုက်ရတဲ့ ဝေဒနာကို ဘယ်လိုပြောပြရမှန်းတောင်သိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်လို ခံစားဖူးတဲ့သူ တွေအတွက်အကျိုးရှိအောင် အစာအိမ်ရောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲနဲ့ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့ကို Sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်…
အစာအိမ်ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ရင်ခေါင်တစ်ခုတည်းနာတတ်တယ်လို့ထင်တတ်တကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အစာအိမ်ကြောင့် နာကျင်တဲ့အခါရင်ခေါင်းတစ်ခုတည်းတင်မကပဲ ၀မ်းဗိုက်၊ ရင်ခေါင်း၊ ကျောဘက်နဲ့ အသည်းနံရံတွေပါနာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နာကျင်တယ်ဆိုတာထက်တစ်ချက်ချက်ထိုးထိုး အောင့်တာမျိုး၊ ရင်ခေါင်းကြီးက တင်းကျပ်နေတာမျိုး တွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့အခါ အစားသောက်ကို ဖြစ်နိုင် သ လောက် အ ပျော့ ရွေးစားပါ။ နော က်တစ်ခုက အချိန်တိုင်းမုန့်ဆောင်ထားပါ။ အစာအိမ်ရောဂါ ဆိုတာ နည်းနည်းနဲ့ခဏခဏ ဆာလောင်တတ်တဲ့သ ဘောရှိတာမလို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဦးစာ ဆေးခန်းပြတာအ ကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးေ တွအပြင် တစ်ခြား ကုထုံးလေး တွေမှီဝဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပျားရည် (သို့) သကြား ရည် ကို သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်(ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များမပါ)
နောက်တစ်ခုက တော့ ဘယ်လို အစာအိမ်ရောဂါ အမျိုးစား လဲဆို တာ ခွဲခြားပါ။ တစ်ချို့အစာအိမ်က နို့တို့ဒိန်ချဉ်တို့ကို လက်ခံတဲ့အစာအိမ်ရောဂါရှိသလို တစ်ချို့က လည်းဒါတွေကြောင့်ရောဂါပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အစာအိမ်က နို့ဒိန်ချဉ်အစရှိတာကိုတည့်တယ်ဆိုရင်တော့ နို့ ပါတဲ့အစားသောက်ေ တွဟာ အစာအိမ်ကိုပိုလို့ကျန်းမာစေတာမလို့ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်.
ပွငျးထနျလှနျးတဲ့အစာအိမျရောဂါအ ကွောငျးကို ခံစားဖူးသူတိုငျးသိကွမှာပါ။ အစာအိမျရောဂါဆိုးကွီးက လူတှေအတှကျသိပျကို ပွငျးထနျပွီးကွောကျစရာကောငျးတဲ့ဝဒေနာတဈခုပဲဆိုတာ အခုပွောပွရငျ ယုံပါ။ အစာအိမျတဈခါတဈခါဖွဈပွီဆိုရငျ အောငျ့လိုကျတဲ့ရငျခေါငျး နာကငျြလိုကျတဲ့ ဝမျးဗိုကျ ခံစားလိုကျရတဲ့ ဝဒေနာကို ဘယျလိုပွောပွရမှနျးတောငျသိမယျမထငျပါဘူး။ ဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့လို ခံစားဖူးတဲ့သူ တှေအတှကျအကြိုးရှိအောငျ အစာအိမျရောဂါကိုဘယျလိုကာကှယျမလဲနဲ့ ဖွဈလာရငျ ဘယျလိုကုသမလဲဆိုတဲ့နညျးလမျးလေးတဈခြို့ကို Sharing လုပျပေးခငျြပါတယျ…
အစာအိမျဝဒေနာဖွဈပွီဆိုရငျရငျခေါငျတဈခုတညျးနာတတျတယျလို့ထငျတတျတကွပါတယျ။ တကယျတော့ အစာအိမျကွောငျ့ နာကငျြတဲ့အခါရငျခေါငျးတဈခုတညျးတငျမကပဲ ဝမျးဗိုကျ၊ ရငျခေါငျး၊ ကြောဘကျနဲ့ အသညျးနံရံတှေပါနာကငျြခံစားရတတျပါတယျ။ နာကငျြတယျဆိုတာထကျတဈခကျြခကျြထိုးထိုး အောငျ့တာမြိုး၊ ရငျခေါငျးကွီးက တငျးကပျြနတောမြိုး တှေအထိဖွဈတတျပါတယျ။
အစာအိမျဝဒေနာဖွဈနတေဲ့အခါ အစားသောကျကို ဖွဈနိုငျ သ လောကျ အ ပြော့ ရှေးစားပါ။ နော ကျတဈခုက အခြိနျတိုငျးမုနျ့ဆောငျထားပါ။ အစာအိမျရောဂါ ဆိုတာ နညျးနညျးနဲ့ခဏခဏ ဆာလောငျတတျတဲ့သ ဘောရှိတာမလို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ဦးစာ ဆေးခနျးပွတာအ ကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဆရာဝနျရဲ့ညှနျကွားတဲ့ ဆေးေ တှအပွငျ တဈခွား ကုထုံးလေး တှေမှီဝဲခငျြတယျဆိုရငျတော့ ပြားရညျ (သို့) သကွား ရညျ ကို သောကျသုံးပေးသငျ့ပါတယျ(ဆီးခြို ဝဒေနာရှငျမြားမပါ)
နောကျတဈခုက တော့ ဘယျလို အစာအိမျရောဂါ အမြိုးစား လဲဆို တာ ခှဲခွားပါ။ တဈခြို့အစာအိမျက နို့တို့ဒိနျခဉျြတို့ကို လကျခံတဲ့အစာအိမျရောဂါရှိသလို တဈခြို့က လညျးဒါတှေကွောငျ့ရောဂါပိုဆိုးတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အစာအိမျက နို့ဒိနျခဉျြအစရှိတာကိုတညျ့တယျဆိုရငျတော့ နို့ ပါတဲ့အစားသောကျေ တှဟာ အစာအိမျကိုပိုလို့ကနျြးမာစတောမလို့ သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ.
ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုခဲ့ကြတဲ့ Gong Yoo ရဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခု